I-14 / 05 / 2020 | RayHaber | raillynews
Usuku: Meyi 14, 2020
Imali Yokuphephela Yophahla Iyosetshenziswa Kwokuhamba Kwabagibeli Ngomgwaqo
Ezokuthutha abagibeli basemgwaqweni ezindlini, imali ekhokhwayo yokufaka uphahla izosetshenziswa kuze kube ngu-19 Julayi ngenxa yokuqubuka kweCovid-31 kuzoba phakathi kwezi-100 nezingu-500. Amanani amathikithi okuhamba kwabahamba ezindleleni achazwe kabusha nguMnyango Wezokuthutha. [Okuningi ...]
Isinqumo Sentela Ngokungezelwa Ukungenisa Izimpahla Ezimhlophe
UNadir Küpeli, uSihlalo weBhodi Yabaqondisi be-Eskişehir OSB, weseka imboni yezwe ukugcina umkhiqizo wayo kanye nokuncintisana ngalesi sikhathi senguquko yentela yamasheya eyengeziwe, ezosetshenziswa ngamanani ahlukahlukene afinyelela kumaphesenti angama-30. [Okuningi ...]
AmaBred Breits Credits Aba 'Amanzi Okuphila' kubaThengi Bomlando
IBursa Chamber of Commerce and Industry, (BTSO), eye yaqala ukusebenza ngamaphrojekthi amaningi we-Historical Bazaar kanye nesifunda seHanlar, esisenkabeni ebaluleke kakhulu lapho okuthenga nokuhweba kuthatha khona inzuzo, nge-coronavirus. [Okuningi ...]
I-EGO, engeze okusha emisha emisha eyenziwe ukuze ihlale ekhaya futhi ihlinzeke izizodwa zokuzihlukanisa, ngesikhathi sodlame lwe-coronavirus (Covid-19), ilethe izicelo ze-Ankarakart online. Ankara Metropolitan Municipality EGO General Directorate [Okuningi ...]
Umasipala wase-Eskişehir Metropolitan, owenze imali enkulu kwezokuhamba emadolobheni, ufinyelela kuma-75. U-Yıl Mahallesi ngesibhedlela saseCity kanye naseKumlubel nge-Opera, ngemuva kuka-75. UYıl Mahallesi no-Şeker Mahallesi. [Okuningi ...]
Isicelo Sokumiselela Invoice Esiqalisiwe e-Antalya
IMeya kaMasipala wase-Antalya Metropolitan uMuhittin Böcek umemezele ukuthi sebeqalile ukufaka isicelo seSuspension Invoice yabantu base-Antalya abanobunzima kwezomnotho. Igcizelela ukuthi uhlelo lokukhokha seluvuliwe njenganamhlanje kuhlelo lokusebenza le-Suspended Invoice, elivumelekile kuma-invoice e-ASAT. [Okuningi ...]
Izimoto Zohambo Lomphakathi ukuze Zibe Nama-virus ngama-Ultraviolet Ray
IMeya kaMasipala waseKayseri Metropolitan UMemduh Büyükkılıç, Ilungu leBhodi le-ASPİLSAN kanye ne-Erciyes University Faculty of Engineering Assoc. UDkt. Wabamba umhlangano nokubamba iqhaza kuka-Ahmet Turan Özdemir. Ngomhlangano wevidiyo [Okuningi ...]
Cishe ama-invoice acishe abe ziyizinkulungwane ezingama-125 amiswa ngezinsuku eziyishumi
Yethuliwe Ibb uMongameli Ekrem İmamoğlu ukusekela abantu ingeniso kulahleka noma ilahleke ngesikhathi senqubo bhubhane, lo "-invoyisi ku Uketshezi" isicelo ihlanganisa abanomusa futhi abanomusa, emkhakheni akakuboni isandla esinika isandla. izicelo [Okuningi ...]
Isicelo seMaskematic yeselula Yaqala ngo-İzmir
Umasipala we-Izmir Metropolitan wethule uhlelo lokusebenzisa imashi kamaskandi ezindaweni lapho kungekho metro ngemuva kwemascemics awubeka eziteshini zikamasipala ukwenza lula ukufinyelela kwezakhamizi ngokukhululeka. Ama-masematics eselula angafakwa noma kuphi. Ngokuqubuka kwe-coronavirus [Okuningi ...]
Ukwehluleka Kwezinso Kokunye Kwethathu Kwalabo Abephathwa Ngokwelashwa KweCoronavirus
Ngokusho kocwaningo, ngaphezu kwengxenye yesithathu yeziguli ezelashelwa leli gciwane leCorona eNew York, zahlushwa yizinso. Kwashiwo ukuthi amaphesenti ayi-15 alaba bantu ayezoboshwa nge-dialysis. Ucwaningo olukhona, okusha [Okuningi ...]
Ikhomishini YaseYurophu Imemezela Imithetho Yokuhamba Kwesikhathi SaseCorona
IKhomishini yaseYurophu isimemezele uchungechunge lwemithetho yokwenza ukuhamba kube kuphephile ngemuva kokuthi izindlela zokulwa namagciwane eCorona zisebenze emazweni amaningi. I-Aviation efika lapho ime ngenxa yenqubomgomo yezokuvakasha kanye nobhubhane [Okuningi ...]
I-Turkey Chambers and Stock Exchanges Union (TOBB), eqhutshwa ukubamba iqhaza kumhlangano we-Vocational Training Online Umhlangano u-Eskişehir Chamber of Industry, umsebenzi wokufaka oqhubekayo "u-Eskişehir Chamber of Industry - Isikhungo Sokuqeqesha Abasebenzi" unikeze imininingwane mayelana. [Okuningi ...]
Izicelo eziSigaba 1000 zokusekelwa kobhubhane lwe-e-Government 3 TL ziyenziwa. Inkokhelo yokuqala neyesibili yemali yokusiza umphakathi yenziwa kulabo abaswele. Imininingwane yokuthi ungasifaka kanjani isicelo sesigaba sesithathu se-1 TL izicelo zosizo lomphakathi [Okuningi ...]
U-Asım Taş, owayenomanzi emhlabeni wakhe ngesikhathi kwenziwa umsebenzi weYHT, wathi amathuluzi ezolimo angcwatshwe ebhodweni ambozwe yinkampani yosonkontileka. Njengoba kuzokhunjulwa; U-Asım, obehlala eKurtköy waseBilecik Center emasontweni edlule [Okuningi ...]
UMnyango Wezimboni Nobuchwepheshe ulungiselele izingcingo ezintsha ezimbili ezizokwakha ukusebenzisana embonini ngokusebenzisa isikhungo esifanele, i-TUBITAK. UNgqongqoshe Wezezimboni Nobuchwepheshe, uMustafa Varank, umemezele izingcingo zokuxhaswa okuphindwe kabili kwabezimboni. "I-oda R&D" ne [Okuningi ...]
Izigidi ezingama-38 zama-Turkish Liras Asetshenzisiwe
UZehra Zümrüt Selçuk, uNgqongqoshe Wezemindeni, Wezabasebenzi Nezenhlalakahle, ukhuphule izinga lezinsizakalo zekhishi abalisekela abantu abayizinkulungwane ezingama-39 kulo nyaka futhi kulo mongo, udlulisa imayela elinganiselwa ezigidini ezingama-484 emakhishini esobho. [Okuningi ...]
Izikhungo Zabahlali zivulelekile ukuze abafundi bangene kwi-YKS ngoMeyi 18-19
UMnyango Wezangaphakathi wathumela umbuthano owengeziwe koHulumeni beziFundazwe abangama-81 maqondana nesikhathi sokufika ekhaya. Kwashiwo kwisangqa ukuthi selokhu kwaqubuka i-coronavirus, kwathathwa izinyathelo eziningi ukulwa nalolu bhubhane futhi lwasungulwa. Kwamukelwe [Okuningi ...]
Yiziphi Izindawo Zokusebenzela, Amabhizinisi Nezikhungo ezizovulwa Ngehora Lesikhathi Sokuvula?
Kumbuthano othunyelwe nguMnyango Wezangaphakathi kubabusi, kusukela ngesikhathi sokubhebhetheka kwezifo zamakhorali, izincomo zoNgqongqoshe Wezempilo kanye neKomidi Lesayensi, ngokuhambisana nemiyalo kaMongameli Recep Tayyip Erdoğan; ukuqubuka / ukudluliswa okubangelwa impilo yomphakathi kanye nokuhleleka komphakathi [Okuningi ...]
UMasipala waseKocaeli Metropolitan, olekelele ezokuhamba ngokunikeza umugqa wethilamu we-Akçaray ekusebenzeni kwezakhamizi, waqala umsebenzi wokuthi owokwedlula owakhiwa ngezinyawo uzokwakhiwa eduze kwendawo iSekapark Tram. UMasipala Wamadolobha Amakhulu [Okuningi ...]
UMongameli we-İBB u-Ekrem İmamoğlu wenza uphenyo eMecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line's Nurtepe Station. Ukugcizelela ukuthi bahlela ukufaka umugqa ekusebenzeni ngoMeyi 19, kepha inqubo yobhubhane ayikuvumeli lokhu, u-İmamoğlu uthe, “Abakwamanye amazwe ngohlelo lokusayina imigqa [Okuningi ...]
Izmir Metropolitan Municipality Tourism Hygiene Board yahlangana ngokwesibili ukuthola ukuthi inqubo izosebenza yini emahhotela nasezindaweni zokudla neziphuzo ngemuva kokukhululeka ezindleleni ze-coronavirus. Izmir zisebenzisa uMasipala waseCrisis ekulweni nokuqubuka kwezifo zamakhorali [Okuningi ...]
Izmir Isayensi IBhodi Wathi 'Shopping ezitolo ezinkulu akufanele avulwe'
I-Izmir Metropolitan Municipality Science Board ikhiphe isitatimende ngokuvulwa kwezindawo zokuthenga ngoMsombuluko, ngoMeyi 11, njengesinyathelo sokuqala senqubo yokujwayelekile kokuqubuka kwecoronavirus. Ikomidi Lesayensi "Impilo yomphakathi ayikasungulwa okwamanje [Okuningi ...]
I-Telegraph yeChampion Yokuqala Yama-Olimpiki ka-Atatürk Yaşar Erkan
Ngo-1936, oweshumi nanye wemidlalo yanamuhla yama-Olimpiki wahlelwa amaJalimane eBerlin. Imidlalo yemidlalo yama-Olimpiki i-Greco-Roman wrestling mechi ibisenzeka e-Dhechland Halle Sports Hall izinsuku ezine. Owokuqala ngamakhilogremu angama-9 ngo-Agasti 1936, 61 [Okuningi ...]
Izimoto Ezihlaselayo ze-Amphibious Assault Zizobe Zisendaweni Yezempi YaseTurkey Ngo-2022
I-FNSS Defense Systems Inc. I-Armored Amphibious Assault Vehicle esebenza ngeMenenja Jikelele kanye noMphathi Omkhulu uNail Kurt epulatifomu le-We Visionary elizosetshenziswa ekuhlaseleni umkhumbi we-TCG ANATOLIA - ZAHA [Okuningi ...]
Ifektri kagesi Yasekhaya nekagesi Kazwelonke Yasesiteji Sokusungulwa
UNgqongqoshe Pakdemirli wathi ngohlobo olusha lwe-coronavirus (Kovid-19), abantu abaningi bafuna ukubamba iqhaza emkhakheni wezolimo wathi, "Sakha amaphrojekthi alabo abazobamba iqhaza kuleli bhizinisi. Intsha enentshisekelo kwezolimo [Okuningi ...]